Usisi bengakwazi ukungcwaba owasha
You are at:Home»isiZulu»Usisi bengakwazi ukungcwaba owasha
USADIDEKILE owesifazane waseCongo eNanda osekuphele izinyanga eziyisishiyagalolunye engakwazi ukufihla indodakazi yakhe eyasha nendlu ngonyaka odlule.
UNksz Gladys Mkhize (59) uthi akasazi ukuthi kufanele enze njani mayelana nodaba lwendodakazi yakhe uNksz Nokuthula Mkhize (36) owasha nendlu washona ngo-Okthoba 2013.
Uthe kusukela ethole ngokushona kwendodakazi yakhe isimo sempilo asikaze sibuyele kwesijwayelekile ngenxa yokuthi kuze kube yimanje akazi ukuthi uzoze avunyelwe nini ukuthi ayifihle.
“Ngesikhathi sithola ukuthi ushe nendlu sitshelwe ukuthi kufanele silinde isikhashana ukuze ahlolwe kuqinisekiswe ukuthi uyena ngempela. Kuze kube yimanje ngisalindile. Ngilokhu ngigqigqa emaphoyiseni ngoba ngifuna ukwazi ukuthi namanje akukaqinisekiswa yini nokuthi singamfihla yini,” kusho uNksz Mkhize.
Uthe indodakazi yakhe yahamba ekhaya ngo-Okthoba nyakenye kuyiSonto yathi iyolanda iselula yayo nejakhethi komunye umngani wayo. Kwathi uma ebona ingabuyi wacela izingane ukuthi ziyombika emaphoyiseni ngoMsombuluko ntambama.
“Saya kubo kamfana obengumngani wakhe ayethe uyolanda kuye iselula nejakhethi sazifica izimpahla kodwa yena sangamthola. Ngakusasa ngabona omunye umama esikhonza naye wangitshela ukuthi bezwe ukuthi kunowesifazane oshe nendlu washona eMatikwe. Safika sathola ukuthi uyena ngempela,” kusho uNksz Mkhize.
Uthe bakhuluma nomfana ohlala kule ndlu ashonela kuyo bakuqinisekisa ukuthi iyona ngempela indodakazi yakhe.
“Angikhululekanga ngendlela ashona ngayo futhi namanje ngisazibuza ukuthi lesi sihluku ashona ngaso sasingukwenza komuntu yini ngoba nomfana ayenaye endlini walala usuku nje esibhedlela emuva kokuphuma nemihuzukwana kodwa ingane yami yona yasha yaba ngamalahle. Kuningi okukhulunywa abantu ngokushona kwakhe okwenza kungaqondakali kahle,” kusho uNksz Mkhize.
Uthe akasenandaba nokuthi kutholakale ukuthi ubani osephutheni ngokufa kwendodakazi yakhe kodwa yena ufuna ukuyifihla. Indodakazi yakhe inezingane ezine ezondliwa nguye. Encane kunazo zonke intombazanyana eneminyaka emibili. Uthe ingane yendodakazi yakhe endala ithathwe igazi ngonyaka odlule kwaba sengathi kuzosheshe kusize ekutheni kwenziwe ulibofuzo (DNA) ngokushesha kepha namanje akhukho okusavelile.
“Ngifuna ukufihla ithambo lakhe ukuze nezingane zakhe zazi ukuthi unina wangcwatshwaphi,” kusho uNksz Mkhize echiphiza izinyembezi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uCol Jay Naicker uthe basalinde kuphume imiphumela yolibofuzo. Uthe ukuhlolwa kwenziwa ePitoli kanti abazi nokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani